Kudzoka JESU KRISTU FOR SEPTEMBER OR October 2016 | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Asati ainyora nezvenyaya kudzoka kwaJesu Kristu, zvinokosha kuyeuka zvimwe dzinokosha chiKristu uye kunyanya kurarama nokutenda pakupedzisira nguva.
IVA VAKRISTU KUSVIKA PAKUPEDZISIRA ANO
First kuva muKristu kunzwisisa kuti Mwari ndiye Musiki wezvinhu zvose uye saka tiri chisikwa chaMwari.
Zvinonzi zvakare vakanzwisisa kuti Mwari akatisika vakasununguka uye rusununguko rwokusarudza kuitira kuti isu kusarudza pachedu sei tishandise chipo ichi chinoshamisa kuti Mwari akatipa « Upenyu ».
Kuti tinzwisise Mwari uye pakasikwa munhu nani, ini zvinokukumbira kuti kuverenga bhuku rangu « The Muparidzi Mambo Kudzoka Yerima anouya chiedza » ona nyaya pamusoro bhuku: The Book – Muparidzi Return raMambo
Mwari nenyashe dzake dzisingaperi akatipa zvose « upenyu » ichi chinokosha zvinosuruvarisa zvishoma vaikoshesa panguva kukosha kwayo wechokwadi. Upenyu yakapiwa kwatiri naMwari pasina kuda chinhu kubva kwatiri kudzoka. Chinhu chipo. Asi rimwe zuva kuti upenyu vanotozvikuvadza unoguma.
Nokuti vamwe, zvinosuruvarisa ichi chinobva muduku kuti upenyu rinomira, nokuti vamwe vakanga kusvika makore blithely zana kana kupfuura.
Zvino, sezvakanga shure nguva rufu rwomuviri, mweya anooneka pamberi musiki wayo.
Tinofanira kunzwisisa kuti nguva yava chisikwa chaMwari uye saka panguva yorufu mweya anosvika zvakananga panguva yokupedzisira mutongo.
Pamiedzo ichi zvitatu zviri aiwanika mweya.
Vamwe vakanga kutsveyama upenyu vachapiwa vachangoramba kupedza nokusingaperi muhero.
Ruzhinji akava upenyu kana wakachena kana rwakatsauka « Warm » zvisinei wo enda kupedza nokusingaperi muhero.
Vaya vaitungamirira upenyu hune utano noruremekedzo uye nokururama Tichaendawo pasinei wavo wakanaka upenyu vanopedza isingagumi kugehena.
Kuva muKristu kunzwisisa kuti mweya vose mhosva pakuzvarwa kupedza nokusingaperi muhero. Zvichatoitika!
Ini hapana anondibvumira kutaura kana kugehena zvichava zvishoma chinorwadza vamwe pane vamwe kunobva yezvakaitwa panguva hwavo.
Hapana chinhu chisina kuchena vanogona kupinda ushe hwekudenga uye sezvo tiri vatakuri vose chivi chemabviro pakupedzisira hwedu inofa upenyu Panyika, saka isu tose mhosva kupedza upenyu husingaperi kugehena.
Chii gehena hapana zvazviri anoziva vachatitaka Zvisinei, mubhuku Inoki tine muchidimbu, pakuti pane nzvimbo kudenga kana akakiyiwa nokusingaperi zvisikwa zvose wakati kuteerera Mwari. Jesu Kristu akataura gehena rinovayeuchidza Gehena (asi hapana rinoti muBhaibheri chii chaizvo Gehena) neniwo hypothesized kuti izvi zvingava gehena ari munyaya yangu: KUNZWISISA KUNZWISISA NAMWARI NEZVEHERO ,
Zviri kutyiwa kuti Hero inzvimbo husingaperi chiripo kunze rwaMwari.Asi ichiri kutongwa uye pokudzora nengirozi dzake. (Ona bhuku Enoki)https://victorpicarra.wordpress.com/le-livre-dhenoc/
Kuva muKristu kunzwisisa kuti chete Rudo rwaJesu Kristu kunogona kutiita kuti kutiza ichi hellish mukusingaperi magumo rakarongwa naMwari kuti vanhu kubvira kusateerera kwaAdhamu naEvha.
Kuti muKristu kuva mutadzi kuziva uye kubvuma kuti kuponeswa norudo rwaJesu Kristu, ichi hellish mugumo.
Kuva muKristu kugamuchira uye kurarama maererano nedzidziso dzaJesu Kristu murudo, rugare, rudo, tsitsi uye kuzvininipisa.
Kuva muKristu ari kubhabhatidzwa mumvura, Mweya uye kuzvarwa patsva.
Nokubhabhatidzwa mumvura tikapfidza zvivi zvedu uye vanouya kuna Jesu Kristu kuti vaponeswe nokubvuma rudo rwake uye neropa rake raakadeura pamusoro pedu pamuchinjikwa.
Kuburikidza nokubhabhatidzwa mudzimu tinokumbira Mwari kuti atungamirire upenyu hwedu. Agamuchira rubhabhatidzo mvura yechiKristu anofanira kuita pachako nzira mumunyengetero kukumbira Mwari kuti atungamirire uye kutarisira hwake.
Saka famba muupenyu asisiri nokuchiva muviri asi vaya noMweya. Ndiwo kubhabhatidzwa noMweya.
Nokudaro tiri patsva muupenyu hwedu yepasi kutevera hwedu murudo, rugare, rudo, tsitsi uye kuzvininipisa. Asi kudzikama kutevera dzidziso dzaJesu Kristu, kushumira Mwari nokuchengeta mirayiro yake uye kubatsira vaya vanotsvaka rubatsiro rwedu. Kungwarira rubatsiro imi muuye haufaniri kutungamirira munhu origamuchira kuramba zvivi zvavo nemabasa akaipa. Uyewo kukutungamirira kuramba dzidziso dzaJesu Kristu.
Kana waita rubatsiro imi vazova kuti vashandise rubatsiro urwu.
Saka chokwadi kupa mari kuti vakapindwa muropa nezvinodhaka kana kuti nedoro hakudereri Unofunga uri inodzokorora rakanaka. Kana akakubvunza mari umupe zvokudya. Uyewo chokwadi kupa mari kune vaya vanoshandisa vana kukumbira haafaniri kukutungamirira kudavira kuti uri kuongorora rakanaka. Iwe vazova zvisizvo ichi kuvana.
Pashure upenyu hwedu panyika, muKristu anozviratidza pamberi paMwari kuti kutonga. Uye nekuda kwerudo rwaJesu Kristu, haasi Achinanga kugehena.
The Christian achitongwa, kana mabasa ake upenyu zvakanga zvakanaka, achaenda umambo hwokudenga. Kana mabasa ake upenyu zvakanga zvisina kunaka zvakakwana, achapfuura nomunyika mupurigatori vasati vapinda hweKudenga. Asi kana mabasa ake upenyu vakanga vakaipa achaenda kugehena kunyangwe akava muKristu.
Nokuti zviuru zviviri zvemakore zvakadaro.
Asi isu tiri pakupera kwenguva uye zvinhu kushandura zvishoma.
Chii Kuchinja ndechokuti panopera nguva Jesu Kristu anofanira kudzokera Earth kutonga ikoko zviuru makore achatsaura kwehumunhu rokupedzisira rokutonga.
Uye vaKristu zvakanaka takamirira kudzoka kwaJesu Kristu ari tariro kuti zvichaitika nokukurumidza.
Ushe Kristu panyika ichava kufanoravidzwa asingagumi, tichararama kwenguva yakareba, asi zvichaita achiri kupfuura rufu asati ane upenyu husingaperi.
Zvakaipa vachaparadzwa akamudzinga kubva panyika munguva chemakore. Tichararama pasi ushe hwaMwari Murudo uye Peace.
Asi, nokuti pane asi, uye zvinokosha. Ko kuti kudzoka kwaJesu Kristu anofanira kuva ari kurwadziwa ekubereka.
Saka pamusoro kudzoka kwaJesu Kristu kwava pedyo, uye upenyu hwakareba zvakaomera vanhu.
Tose tinogona kuona kuti nokufamba kwemakore, kunyanya sezvo 29 September 2008, uye vakawanda dzakaoma zvese. Ona nyaya yangu:OKUPEDZISIRA ZVIRATIDZO vatatu KUDZOKA JESU KRISTU PASI PANO!
Pasi : kudengenyeka kwenyika, kuputika kwemakomo, madutu, dzvotsvotsvo remvura, madutu, moto, okunze shanduko, Madhaka, asingazivikanwi nzeve ruzha uye ivhu collapses pakusika crevices makuru.
Heaven: meteorite Falls, zuva kwemakomo, inozivisa kudzoka Nibiru, Kudziya zuva nenyika dzaro mapuraneti, UFO.
Wildlife : Dead hazvitaurwi nemamiriyoni pagore kubva zvipfuwo, mhuka dzesango neshiri uye nehove.
Humanity : Ruin, nhenda, kurasikirwa zvaunokoshesa, Eksodho, Zvinoitwa nesimba, Hondo nerunyerekupe rwehondo.
The Church : Kutsauka kunoonekwa panguva soro revarombo. The Pope akaita repudiated dzidziso dzaJesu Kristu pakuziva zvitendero zvose sezvo nzira kuna Mwari. Saka kukanganwa chaizvo mashoko aJesu Kristu, « Ndini nzira nechokwadi uye noupenyu; hapana unouya kuna Baba, asi nekwandiri! «
Aya mashoko aJesu Kristu vane simba uye regai vanokweretesa pachavo kuti makakatanwa.
Unknown nzeve ruzha zvinogona kududzirwa sezvo Apocalypse Hwamanda. Https://youtu.be/mTOQvDzihTU
Zviitiko zvose izvi zvaitika saka outsized uye vakanga akaporofita muBhaibheri kuzivisa mugumo nguva uye kudzoka kwaJesu Kristu.
Zvose zvinoitwa naMwari kumutsa vanhu, asi urombo vashoma chaizvo sokuti kuziva nguva chaiyo tinorarama.
Varume vanofunga zvakawanda pamusoro chii vachaita vhiki inotevera kana sei vachaita kuvhara kuguma mwedzi, pane kunyengetera kuna Mwari kuti ruponeso rwemweya yavo, kunyange pakati pevaKristu.
Asi vose matambudziko nenhamo kuburikidza iyo vanhu kuchaita achiipa uye kunyange kusvikira Ishe Jesu Kristu.
Zvinotyisa nguva kumirira isu pamberi kudzoka Mambo Kings Jesu Kristu.
Tinoziva nokuda inference kuti okupedzisira nguva asati adzoka achava yakaomesesa.
Kupfuura kare, tinofanira kunyengetera uye kunyengetera zvakare uye zvakare ose zuva.
Tinofanira kuonga Mwari ose nguva mubatsiri wake uye kunyengetera kuna Mwari kuti atungamirire uye adzivirire nesu nguva yose kuvapo kwedu, kunyanya munguva dzino dzakaoma uye chezvinyorwa.
Kuva muKristu kunzwisisa kuti rudo rwaJesu Kristu ndiye ruoko zvaipiwa naMwari kuti atiponese kubva kugehena.
Kuwedzera pakuponesa mweya yedu kubva kugehena norudo rwake Jesu Kristu muchagarawo kuponesa vanoverengeka vedu pamberi mumuviri paakadzokera Earth.
Avo vachaponeswa uye achava zvinoumba Chechi yaJesu Kristu, ivo richachinjwa kuva pakarepo vanofunga achava muviri chiedza. Ivo ichabviswa kudenga uye vachagara kuwana zvakananga kubva upenyu hwepasi kuupenyu husingaperi pasina rufu.
Vaya vakafa uye vave vakaba kana vaiva vapenyu. Vachamutswa mumuviri chiedza uye zvicharehwawo kubviswa kudenga nevaya makaponeswa kubva kwavo vapenyu.
Pamwe chete vanopinda muchato weGwayana achava sungano isingaperi kuti achaita Jesu Kristu pamwe nechechi yake kuumbwa.
Kana Mwari ari kuedza kwedu Wake unotofanira ndechokuti vazhinji angaponeswa uye kuti zvingave chikamu Church yaJesu Kristu kuti vachabviswa.
Jesu Kristu uye Mwari rudo munhu!
Asi murume waanoda kupedza upenyu husingaperi?
Usafunga kuti munhu nguva kuti mugumo nguva ndiye maturo, kuti uchapupu mazhinji, kuguma nguva chaizvoizvo vachimhanya hapana achange kuchimisa.
Jesu Kristu ndiye pamukova uye yava nguva yokuti tariro vaponeswe, kuti zvivi zvedu, zvedu kucharohwa, edu zvikanganiso, zvedu zvikanganiso uye pfungwa dzedu kuchena.
KUFAMBIRA MBERI zviratidzo kudzoka JESU KRISTU
Tichifunga kuchiita zviratidzo tiri wokupedzisira tatamuka pamberi kudzoka kwaJesu Kristu zvechokwadi.
Ini akatsanangura nyaya yangu OKUPEDZISIRA ZVIRATIDZO vatatu KUDZOKA JESU KRISTU PASI PANO! Paiva zviratidzo zvitatu pamberi kudzoka kwaJesu Kristu.
01) The pachena pamusoro Anti-Kristu
02) Chechitatu rokuvakazve temberi muJerusarema
03) A yose kunetsana kusangana naJesu Kristu panguva adzoka
Nokuti chiratidzo chokutanga « Anti-Kristu » tinofanira kunzwisisa kuti pane dzakasiyana siyana.
Chokutanga mukati kereke, kwaAntikristu achiumbwa vose anotevedzana madzimambo vanapapa kubvira Lateran zvibvumirano.
Wokupedzisira Papa « François » personalizes antikristu ichi kuti vaivanda Gwayana bere inotungamirira vaKristu vanotevera kugehena chaiko. Ona nyaya yangu: THE YEPAMUTEMO mutsara rufu KEREKE CATHOLIC
Maererano hwaMaraki chiporofita vanapapa, Pope Francis ndiye papa wokupedzisira. Ani naani anonzi muuprofita « Peter reRoma », izvo zvakaita chechi munguva yokutambudzika risati raparadzwa kuRoma uye kudzoka kwaJesu Kristu.
Kuparadzwa Roma hazvirevi kuparadzwa muguta reRoma pedyo zvikuru nokudengenyeka kwenyika, asi pokuwa Europe sezvo Roma idzva hazvo « mambo Chapter XII ari Apocalypse bhuku wechisere. » uye saka kwaAntikristu hurongwa.
Tinoziva kubva mubhuku Apocalypse uye nomuprofita Dhanieri, kutambudzika kukuru okupedzisira mwedzi 42.
Saka sezvo Pope Francis akasarudzwa March 13, 2013 tinofanira zvichida kuona kudzoka kwaKristu Panyika muna September kana October 2016, zvimwe pamutambo hwamanda.
Ona nyaya yangu: KUGUMA MUMAKORE VHIKI OF DHANIERI KUPERA PAKUPEDZISIRA 2015 OR 2016
Anti-Kristu ariwo chimiro nemadhimoni hutatu mhuka mbiri uye muprofita wenhema ane chinangwa kuti kutambudza vaKristu uye kuvatungamirira zvakananga munzira kugehena.
nyore tinogona kunzwisisa kuti ichangopfuura vanapapa ndidzo mhuka anorondedzerwa mubhuku Apocalypse Chapter 17.
By pamusoro vamwe kuona muprofita Pope Francis wenhema. Pachako Ndinotenda kuti Papa Francis mumwe zvipenyu mbiri kwegungwa, mhuka dzenyika yokuva yaimbova Pope Benedict XVI kuti vakawanda Aimbova Pope achiri mupenyu. Kana muporofita wenhema Ndinoziva mumwe chete, ane vateveri vanotambudza vaKristu.
Zviri kuti unonzi ‘Mohammed « uyo kunyange akafa muna 632 akabereka chitendero chenhema kuti vanoshumira Islamists uye jihadists.
vakiridzo Uyu chido chaiye vechiJudha, asi Mwari haazombobvumiri vavakezve temberi pedyo chechi « al-Aqsa » pamusoro chitendero chenhema nomuprofita wenhema.
Temberi itsva ichange temberi raJesu Kristu achaburuka achibva kudenga« Jerusarema rokudenga »
Ndicho chete uye chokupedzisira tatamuka pamberi kudzoka kwaJesu Kristu.
Zviri pachena kuti hondo iyi akatanga kubva 2012. Tinoona kutambudzwa uku riri kare kudyidzana uye zvavakawana nesimba uye kukwira rimwe zuva.
Zviri ichi kunetsana kuri kuenda kunotora Jesu Kristu ari kudzoka kwake.
Tiri February uye chii kwaziviswa mune zvinobudisa nhau iri kure zvichikurudzira. Turkey uye Saudi Arabia vanoda kuenda kundorwa kuSiriya. VokuRussia uye Iran vanoshora uye kuvimbisa kudzokera izvi itsva pabhokisi belligerents kana vachiuya kuSiriya.
China ayo maitiro hondo kuzorwa US aro nevatsigiri muAfrica neSiriya zvoupfumi mumunda. Nokuti uto raro kupindira kuEast zvakasimba, kunongova nyaya nguva zvechiuto. Zviripachena Chinese achapindira kutsigira mauto eRussia.
Zvaiva pamapani reMegidho muIsraeri kuti Jesu Kristu maererano neBhaibheri vanofanira kumisa hondo iyi .
Saka kana pari hondo nokupararira weSiriya uye Israeri achapiwa kurwiswa. Zvadaro pachava kudanidzira uye nemisodzi asi zvichava kunonoka kuuya kuna Jesu Kristu uye vagoponeswa. Nokuti ichi chichava mugumisiro mugumo nguva iyoyo ichazadziswa pamwe kudzoka kwaJesu Kristu.
Uye zvinoita kuti ari kuongorora zviratidzo izvi, nokuti mwedzi September kana October, 2016.
Gore rino 2016, isu nechekare kuti zvichava kupfuura 2015. Uye kana Kristu ngadzive kukasaitwa mugore rino 2016, tinofanira kutarisira chinhu chakaipisisa. Akadai zvoupfumi anoputsika, asiwo kune njodzi hukuru makuru.
Handimboregi kudzokorora pachangu zvakakwana, handizi muporofita , uye ini nechekare vanyengedzwa kakawanda kukanganiswa pfupi kuti kudzoka raIshe wedu Jesu Kristu. By nezvayakaipira handina chakaipa pamusoro kusembura zviratidzo gore negore .
Sezvo ini ndakanganisa zvakawanda pamusoro kuziviswa kudzoka kwaJesu Kristu, ndinoda kungwarira uye iwe ona kuti Jesu Kristu achauya sembavha, uye saka hapana anonyatsoziva apo achava kudzoka kwake.
Uyewo handina kumirira kudzoka kwake gore rino kuti mwedzi September kana October maererano kwangu kuongorora zviratidzo, asi ndinofanira kutaura kuti Jesu Kristu anogona kuuya mberi uye tora chechi yake chero nguva asati adzoka.
Ndinofanira kutaura kuti kudzoka ichi kunogona papera uye kupindira mune 2017 kana 2018 iro pane zviratidzo yandichaita tsanangura kana nguva yasvika.
Saka iva nechokwadi chokuti, kunyengetera uye tariro kwava kuda kudzoka kwaJesu Kristu nokuti nokukurumidza richadzokera uye shoma kurwadziwa uchava wakajeka kuti vanhu.
Gore rino muna 2016 kunyange zvazvo zvakaoma kuti vanhu kuva nesu vaKristu gore tariro, kutendeuka uye munyengetero naJesu Kristu anoramba isu vakanyorwa mubhuku yeupenyu husingaperi.
Tendeukai vazhinji vanouya Kristu kana usingadi kupedza isingagumi kuGehena.
Panguva yokunyorwa ino neimwe vanogona kuponeswa. Mwari akapa imi rusununguko rwokusarudza uye iyi ndiyo nguva kutora yakarurama.
Uyai kuna Jesu Kristu nokubvunza rubhabhatidzo mvura mupristi, mufundisi kana muKristu uye tonyengetera zvakare uye zvakare kuti vawane kudzivirirwa Mutsvene waMwari kuti akubatsire, kukudzivirira uye kutungamirira nhanho dzako mukati merima yomugumo nguva rima.
Rudo, Rugare uye Mufaro mumwoyo uye dzimba kutarisira kubviswa Church vamwe uye kudzoka paGomo reMiorivhi muJerusarema Ishe naMambo wedu Jesu Kristu, chete mwanakomana waMwari hwake ushe Mambo Madzimambo enyika kwemakore ane chiuru anoparadzanisa pavanhu anodudzira nezvekuguma kwenyika.
Ini kukokai kuverenga nyaya yangu:
KANA JESU KRISTU anononoka RINO, KEREKE Zvibvisike risati CHIZVARWA!
KUPERA ROKUPEDZISIRA VHIKI OF DHANIERI KUPERA PAKUPEDZISIRA 2015 OR 2016
Sezvo nguva iri Munyengetero Ini kukokai kunyengetera:
MINYENGETERO Baba vedu uye Rumbidzai Mary